Fikarohana momba ny firaisana Taylor Swift amin'ny maha-teraka tamin'ny maty tao Florence Reese ary ny fijerena ny fitoviana ara-batana nandritra ny fotoana tany amin'ny sehatry ny zaza teraka indray:
Noho noho ny fahalehibeazan'i Taylor Swift dia nangataka ny fiainany taloha ho azy aho nandritra ny fivoriana miaraka amin'ny media tranainy Kevin Ryerson, izay nantsoina ho mpitari-dalana ho an'ny fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay nampiseho ny fahafaha-manao ny fiainana taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana ambony.
Ahtun Re dia nanambara fa i Swift dia mpihira mpihira mpihira Tennessee Florence Reese, izay nanoratra hira iray tamin'ny taona 12 izay nanjary malaza sy tononkalo ho an'ny hetsika asa. Ity hira ity, Izay misy anao, dia nosoratana mba hanohanana ireo mpitrandraka arintany izay nanao fitokonana ary ity hira ity dia notohizan'ireo mpihira angano toa izany toa an'i Pete Seeger ary tato ho ato, nataon'i Billy Bragg sy Natalie Merchant. Lahatsary miaraka amin'ny hira mihintsy i Florence Reese sy i Natalie Merchant Izay misy anao dia omena ao amin'ny faran'ity pejy ity.
Taylor Swift dia zazavavy mozika, toy ny Florence Reese, raha toa i Taylor nifindra avy ao Pennsylvania ka hatrany Nashville, Tennessee tamin'ny taona 14 izay nanjary mpanakanto tanora indrindra hatramin'izay nanasoniavan'ny Sony / ATV Music.
Florence Reese dia mpikatroka mafàna fo niasa ho an'ny sendikà sy ny olana ara-tsosialy. Taylor Swift dia mpikatroka mafàna fo manohana ny vehivavy eo amin'ny politika, manentana ny fampiatoana ny fifidianana, ary koa ny fanentanana hanohitra ny fanavakavahana LGBT sy ny heloka bevava.
Ny hany sary avy amin'i Florence Reese izay nihaonako dia ny an'i Reese amin'ny maha-zokiolona azy. Na izany aza, ny iray dia afaka mamantatra ny fiheverana ny rafitra endrika eo amin'ny Reese sy Swift. Raha ny marina, dia maminavina aho fa rehefa Taylor Swift tenany ho tonga vehivavy zokiolona, ​​dia hitovy amin'i Florence Reese amin'ny vanim-potoana mitovy izy. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Famaritana ny fahanterana sy ny fitoviana ara-batana amin'ny toe-pahasalaman'ny zaza teraka
Ny fandinihana ny fivoaran'ny endrika mandritra ny vanim-potoana fahanterana dia fampivoarana vao haingana amin'ny fikarohana reincarnation, toy ny taloha, dia tsy nisy azo natao ny sary avy amin'ny fahatongavana ho nofo.
Ny tranga mampihetsi-po izay azonay hitazonana ny fivelaran'ny endrika nandritra ny fe-potoana 20 dia ny an'i James Leininger, izay nanana fahatsiarovana mazava hatramin'ny fahazazany dia ny mpanamory fiaramanidina mpiady maimaimpoana faharoa maty tany anaty fianjeran'ny fiaramanidina. Misy andian-tsary efatra mampitaha an'io vanim-potoana io dia maneho ny fitoviana ara-batana voatazona mandritra ny androm-piainana roa amin'ny fahazazana, ny adolantsento ary ny olon-dehibe. Raha te hianatra bebe kokoa azafady, alefaso any amin'ny:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny fisehoan-javatra eo amin'ny fisehoan'i Reese sy Swift dia tsy miseho mazava noho ny fahasamihafan'ny taonan'ireo olona roa ireo ao amin'ny sary naseho, fa ny fiheverana amin'ny ankapobeny ny rafitra na ny taolam-paty dia mety ho ankasitrahana.
Fiainana Talenta-Fitaizan-janaka: Ny fahaiza-manoratra nataon'i Florence Reece dia nahitana ny talentan'i Taylor Swift.